आफ्नै बिद्यार्थीलाई यौन दुर्ब्यवहार गर्ने शिक्षकलाई यसरी जुत्ताको माला भिराएर गाउँ डुलाईयो – Gulminews
Home/अपराध/आफ्नै बिद्यार्थीलाई यौन दुर्ब्यवहार गर्ने शिक्षकलाई यसरी जुत्ताको माला भिराएर गाउँ डुलाईयो
आफ्नै बिद्यार्थीलाई यौन दुर्ब्यवहार गर्ने शिक्षकलाई यसरी जुत्ताको माला भिराएर गाउँ डुलाईयो
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७५ श्रावण ८, मंगलवार १७:०० मा प्रकाशित
बुटवल ८ । ससाना वालिका विद्यार्थीहरुसंग यौनिक कृयाक्ला गर्ने पर्वतका एक शिक्षकलाई त्यहाँका आक्रोषित महिलाहरुले जनकार्वाहीका रुपमा कालोमोसो दल्दै र जुत्ताको माला भिराउँदै गाउँ डुलाएका छन ।
फलेवास नगरपालिका वडा नम्वर–६मा रहेको माझीगाउँ प्राथामिक विद्यालयका प्रधानध्यापक समेत रहेका शिक्षक खिलप्रसाद पौड्याललाई फलेवासका महिलाहरुले यस्तो कार्वाही गरेका हुन् । उक्त जनकार्वाही पछि फलेवास प्रहरीलाई बुझाईको पौड्याल विरुद्ध त्यस विद्यालयका ७ देखि १२ वर्ष उमेरका तिन वटी वालिकालाई अप्राकृतिक मैथुन विरुद्धको मुद्धा दायर गरिएको पर्वत जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी दिलिप घिमिरेले जानकारी दिएका छन ।
नावालिकाहरुलाई यस्तो सम्म गरेछन
गत दुई वर्ष देखि त्यस विद्यालयमा प्रधाध्यापक भएर आएका पौड्याल डोल्पा, म्याग्दीको झिं, फलेवासकै पाङ्ग्र र कुर्घाको विद्यालय हुँदै आएका रहेछन । पिडित वालिकाहरुसंगको कुराकानी बुझ्दा उनिबाट यौन हिंसामा परेका वालिकाहरु चार वटी रहेछन ।
एउटी व्राह वर्षिया वालिका त्यस विद्यालयबाट कक्षा ५ पास भई अर्को विद्यालयमा कक्षा ६ भर्ना जाने १२ वर्षिया वालिकालाई तिम्रो घरमै आएर ट्युशन पढाउँछु भने छन । उनले सर हामी गरिव छौं सक्दैनौ भनिछन । उनका वावु आमाले पनि सक्दैनौ भने छन ।
ति शिक्षकले पैसा पर्दैन म सित्तैमा पढाई दिन्छु भनेर पाँच दिन सम्म ट्युशन पढाउन भन्दै उनको घरमा पुगेछन । ट्युशन पढाउने त्यो पाँच दिन भित्र उनले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नेतिर लागे छन । पछि बन्दै गरेको भवनको पछाडी शौचायमा लगेर यौनिक कृयाक्लाव गरेबाट क्रमशः अरु थप तिन जना वालिकाहरु उनको शिकार बन्दै आए ।
एउटी १० वर्षिया वालिकालाई बैशाखमा तिन पटक, जेठमा ३ पटक र असार ८ गते एक पटक गरी सात पटक सम्म आफुलाई यौनाङ्गमा ति सरले लाजमर्दो कार्य गरेको उनले बताईन । उनकी आमाले भनिन–‘ छोरी टाउँको दुख्ने रिङ्गाटा लाग्ने विरामी पर्न थाली हामीलाई शंका लागेर सोध्दा ति सरले त्यस्तो घिन लाग्दो कार्य गरेको खुलेको थाह पाएका हौं । ’
ति १० वर्षिया वालिकालाई पहिलो पटक यसो गरे, ‘वालिकाकै शव्दमा हामी सवै जनालाई चौरमा पढ्न हिँड भनेर लैजानु भयो । हामी सवै गयौ । मैले कलम कक्षा कोठामै विर्सेछु । म फर्केर आएँ । त्यही वेलामा मेरो…… औला राख्नु भयो । .. अंगमा समात्नु भयो । म चिच्चाएँ । मेरो मुख थुनि दिनु भयो । कराईस र कसैलाई भनिस भने मारेर वोरामा हालेर कसैले नदेख्ने ठाउँमा लगेर फाली दिन्छु भन्नु भयो । पछिल्ला ६ चोटी सम्म पनि त्यही भनेर डराउन दिएकोले नभनि बसेकी हुँ ।’
ति वालिकाहरुका अनुसार उनिहरुका हातहरु समेतर उनको गुप्ताङ्ग सुम्सुमाउन लगाईन्थ्यो । अप्राकृति मैथुन गर्न लगाईन्थ्यो । उनि भन्दा कान्छि सात वर्षिया वालिकालाई समेत छाडेनन उनले ।
धमाधम चारै जना वालिकाहरु टाउँको दुख्ने विमार लाग्न थाले पछि कुरा खोल्न बाध्य भए । ति शिक्षकको घरमा दुई छोरा, सहकारीमा काम गर्ने भर्खरकै श्रीमति रहेको स्थानियले बताए ।
‘विद्यालय कै शिक्षकबाट यति सम्म यौनिक अपराध ? कसरी सुरक्षित राख्ने छोरीहरु ? यस्तो प्रश्न गर्दै ति वालिकाकी आमा भन्छिन–‘ त्यस्ता अपराधीलाई त फाँसी नै दिनु पर्ने हो तर नेपालमा त्यस्तो कानुन छैन । कानुले दिए सम्मको कडा कार्वाहीको हामी माग गर्दछौं ।’